Archive du 20190126
Mitamberina ny laza ratsin-dRajoelina 10 taona katroka anio ny « Lundi Noir »
Folo taona katroka anio 26 janoary 2019 ny “Alatsinainy Mainty” na “Lundi Noir” na “Black Monday” nanamainty tanteraka ny lanitr’Antananarivo sy ny firenena noho ny fandrobana sy fandorana fananam-panjakana sy fananan’olon-tsotra ny andron’ny alatsinainy 26 janoary 2009,
Governemanta Ntsay “Toa manambany anay vehivavy”, hoy i Eliana Bezaza
“Diso fanantenana tanteraka amin`ny firafitry ny governemanta vaovao aho satria tsy voahaja ny fifandanjan’ny isan`ny lahy sy ny vavy”, hoy i Eliana Bezaza, sekretera nasionalin`ny antoko PSD.
Rivodoza Eketsang Efa nanalavitra an’i Madagasikara nanomboka omaly
Na dia mbola nahitana rotsak’orana ihany aza teto an-drenivohitra omaly alakamisy25 janoary dia fantatra fa efa nanalavitra antsika eto Madagasikara ilay rivodoza Eketsang.
Trafikana andramena Tsy hananana antra, hoy ny minisitry ny tontolo iainana vaovao
“Tolerance zero” na koa hoe tsy hananana antra ny resaka trafikana andramena sy harena voajanahary hafa eto Madagasikara.
Resaka fakana tany Misy misoloky sahady ny anaran’ny mpitondra
Manomboka sahady ny fisandohana ny anaran’ny fitondrana ataon’ny mpanao ratsy ankehitriny.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Tahina Razafinjoelina Faniriako ny hiroboroboan’ny fanatanjahantena Malagasy
Hiverina indray manomboka izao ny pejy manokana ato amin’ny gazetintsika hitaterana an’ireo kintan’ny fanatanjahantena Malagasy rehefa somary niato kely nanomboka tamin’ny fiatrehana ny Mondial baolina kitra tamin’ny taon-dasa 2018 tany Rosia
Tsipy kanetibe Malagasy Hanomboka anio ny « Championnat de Mada 2019 Doublette Mixte »
In-3 miantoana dia ny 26-27 janoary 2019 sy ny 16-17 febroary 2019 ary ny 09-10 martsa 2019 no hanatanterahana etsy amin’ny boulodrôme Paddock sy Cbt Mahamasina ny fifaninanana tsipy kanetibe fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara « doublette mixte » 2019.
Ligin’Analamanga sokajy Ligue 1 Resin’ny Cf Tfc 2-1 ny Elgeco Plus tompondaka teo aloha
Teny amin’ny kianjan’i Carion no nanatontosana ny andro faha-4 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny Ligue 1 Analamanga 2018/2019.
Edito Mitohy ny iraka…
Samy manana ny fandraisany sy famakiany ny firafitry ny governemanta vaovao ny rehetra. Ny nisongadina aloha dia minisitra 2 ihany no tsy niala tamin’ny toerany.
Betroka Dahalo 8 maty voatifitry ny zandary
Nangotraka ny zava-nitranga tany amin’ny distrikan’i Betroka, Faritra Anosy ny alakamisy alina lasa teo.
Zandarimariam-pirenena Hohamafisina ny ady amin’ny kolikoly
Afa-po tanteraka tamin’ny fitantanany ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena teo aloha ny jeneraly Randriamanarina Jean Christophe.
HAFARATRA HO AN’NY MINISITRY NY RAHARAHAM-BAHINY
Avy hatrany dia nandefa hafatra tany amin’ny minisitry ny raharaham-bahiny vaovao ny havan’i Ando.
Tsimialonjafy Efa hita ny nofo mangatsiakan’izy mivady lehibe
Ny alakamisy alina teo no hita soa aman-tsara ny vatana mangatsiakan’izy mivady lehibe, nipetraka tamin’ny trano farany ambany indrindra etsy Tsimialonjafy Ambaninampamarinana.
Reniranon’Andrakaraka –Tolagnaro Maty avokoa ny hazandrano
Zary lasa resa-be ary saika manerana ny tanànan’i Tolagnaro ny tranga misy ao an-drenivohitra Anosy.